देवेन्द्रजीले अरुलाई एउटा औंला ठड्याइरहँदा बाँकी औंला उहाँतर्फ नै सोझिएको छ: गंगानारायण श्रेष्ठ – Akhabar Dainik
देवेन्द्रजीले अरुलाई एउटा औंला ठड्याइरहँदा बाँकी औंला उहाँतर्फ नै सोझिएको छ: गंगानारायण श्रेष्ठ
नयाँ शक्ति पार्टीलाई छुट्टै राजनीतिक संस्कारसहितको पार्टी बनाउने भन्दै बाबुराम भट्टराईले माओवादी त्यागेको करिब दुई बर्ष भयो । यो दुई वर्षमा बाबुराम भट्टराईको शक्ति क्रमश : क्षीण हुँदै गइरहेको छ । बिशेषत : उनले बोकेको राजनीतिक विचार, उनको स्वभाव र नेतृत्व क्षमताप्रति उनलाई अहिलेसम्म साथ दिएकाहरुले उनलाई चटक्क छाड्न थालेपछि उनी कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । डा भट्टराईका सबै भन्दा नजिकका भनिएका विस्वासपात्र देवेन्द्र पौडेलले पनि उनलाई साथ छोडेपछि नयाँ शक्तिको भविष्यमाथि स्वभाविक रुपमा प्रश्न जन्मिएको छ । यसै सेरोफेरोमा अझै पनि भट्टराईलाई साथ दिदै आएका गंगानारायण श्रेष्ठलाई हामीले सम्पर्क गरि सुरुमै के अब नयाँ शक्ति विघटन नजिक पुगेको हो भनेर प्रश्न गरेका छौँ ।
नेता श्रेष्ठसंग अखबार दैनिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
हेर्दा–हेर्दै नयाँ शक्ति पार्टी त सकिनै लाग्यो नि है ?
पार्टी सकियो भन्ने त भ्रम मात्र हो । पार्टीमा मान्छेहरु आउने र जाने क्रम चलिरहन्छ । अहिले केही साथीहरु नयाँ शक्ति छोडेर जानु भएको छ, त्यो पनि आउने र जाने प्रक्रियाको निरन्तरता मात्रै हो । नयाँ शक्ति पार्टी महाधिवेशन आयोजक समितिले पार्टीलाई जीवन्त राख्न केही निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि नयाँ शक्ति सकियो भन्ने जुन भ्रम छरिएको छ, त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा चिर्नेछ ।
नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गर्ने मुख्य भूमिका खेलेका नेताहरु नै बाहिरिएपछि प्रश्न त उठ्यो नि ?
साथीहरु अलग भएर जाँदा खुशी हुने कुरा हुँदैन । तर, विचार, सोच र बुझाइ नै अलग भइसकेपछि एउटै बाटो हिँड्न सक्ने सम्भावना नहुँदो रहेछ । हिजो नयाँ शक्ति पार्टी निर्माणमा उहाँहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको सत्य हो । त्यसका लागि नयाँ शक्ति पार्टी उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन्छ । र उहाँहरु अलग भएपछि पार्टी नै चल्दैन भन्ने कुरा सत्य होइन । नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने ठूलो पंक्ति अझै सुरक्षित छ । नयाँ साथीहरु आउने क्रम पनि उत्तिकै छ । त्यसैले उहाँहरु जानुभयो, अब नयाँ शक्ति नै सकियो भन्ने कुरा सत्य होइन ।
भएको चाही के हो ? नयाँ शक्ति बनेको एक वर्ष पनि नपुग्दै उनीहरु किन असन्तुष्ट हुन पुगे ?
खासगरी दुईवटा कुरा छन् । पहिलो राजनीतिक वैचारिक कुरा हो । हामी नयाँ शक्ति पार्टीले नयाँ विचार हुनुपर्छ, पुरानो विचार र वादबाट अब परिवर्तन छैन भनेर हामीले वाम लोकतान्त्रिक समाजवादी आफूलाई भन्छौँ । यसबारे हामीबाट अलग भएर गएका साथीहरुमा विमति थियो । उहाँहरुले नयाँ शक्ति वाम हो कि लोकतान्त्रिक हो भन्ने प्रश्न उठाइरहनु भएको थियो । हामीले वाम लोकतान्त्रिक हो, दुवै हो भनेका थियौं । त्यसमा उहाँहरुको असमति थियो ।
अर्को पार्टी गठन भएको एक वर्ष पनि नहुँदै स्थानीय निर्वाचनको सामना गर्नु प¥यो । यही बेला सरकारले षड्यन्त्र गरेर चुनाव चिह्न पनि दिएन । त्यसपछि हामीले चुनावको तयारी गर्न पाएनौं । त्यसकारण नयाँ शक्ति पार्टीले चुनावबाट अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । त्यसपछि अहिले हामीलाई छोडेर गएका साथीहरु विचलित हुनुभएको हो । उहाँहरुलाई जनताले नयाँ शक्तिलाई अझै स्वीकारेका रहेछन्, पत्याएका रहेनछन्, नयाँ शक्ति बनाउन नसकिने भयो भन्ने लाग्यो । नयाँ शक्तिको भविष्य छैन भन्ने निष्कर्षसहित उहाँ नयाँ शक्ति निर्माण अभियानबाट थाक्नुभयो । र नयाँ शक्तिबाट अलग हुन पुग्नुभयो ।
नयाँ शक्ति छोडेर जाँदा उहाँहरु निराश र थकित भएको मैले देखेको छु ।
उनीहरुले नयाँ शक्ति पार्टी बन्ने आधारलाई त्यहाँभित्र अवरोध गरिएको, असहयोग गरिएको र अन्तिममा त्यहाँबाट निकाल्ने काम भयो भन्ने आरोप छ त ?
मैले त्यसरी बुझेको छैन । नेपालमा जति पनि राजनीतिक पार्टीहरु छन् । त्यसभित्र राजनीतिक बहस गर्ने विषय अन्य पार्टीमा भन्दा नयाँ शक्तिमा लोकतान्त्रिक र व्यवस्थित रहेको मैले देखेको छु । यति राम्रो राजनीतिक व्यवस्थापन अन्य कुनै पुराना पार्टीहरुमा मैले देखेको छैन । हामी कारबाही गर्ने पक्षमा पनि थिएनौँ । हामी कसैलाई कारबाही गर्न पनि चाहँदैनौँ । तर उहाँहरु नयाँ शक्ति छोडेर माओवादीसँग एकता गर्ने तयारी गरेपछि हामीले प्रक्रिया पुर्याउनका लागि मात्र कारबाही गरेका हौँ । खासमा हामी देवेन्द्र जीहरुलाई कारबाही गर्न चाहदैनथ्यौं ।
उहाँहरुले पार्टीसँग सल्लाह नगरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो । यदि फरक विचार पार्टीको आन्तरिक कमिटिमा राख्ने र त्यहाँ सम्बोधन भएन भने बाहिर पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर उहाँहरुले आन्तरिक कमिटिमा त्यस्तो फरक विचार नराखी पार्टीलाई जानकारीसमेत नदिई सीधै बाहिर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो ।
त्यो अनुशासनविपरीत थियो । र, पनि पार्टीले कारबाही नगरेर स्पष्टीकरण मात्र सोधेको थियो । त्यसलाई उहाँहरुले कारबाही सम्झिनु भयो । देवेन्द्रजीको संयोजकत्वमा धु्रवीकरण संयोजन समिति बनाउनु भयो, कार्य विभाजन गर्नुभयो । त्यो भनेको समानान्तर पार्टी भयो । उहाँहरु माओवादी केन्द्रमा फर्कंनै चाहनु हुन्थ्यो । त्यसपछि हामीले उहाँहरुलाई हामीले बाध्य भएर कारबाही गरेका हौं ।
नयाँ शक्तिले जनयुद्धकालीन मुद्धा र त्यहाँबाट आएका नेता कार्यकर्तालाई अपमान गर्छ, मलाई त्यसले पिडा हुन्थ्यो भन्ने देवेन्द्र पौडेलको भनाइ छ, किन जनयुद्धप्रति त्यस्तो रिस राखेको ?
नयाँ शक्ति पार्टीमा धेरै साथीहरु जनयुद्धकालीन पृष्ठभूमिबाट आउनु भएका हुनुहुन्छ । म आफैं पनि जनयुद्धकालीन पृष्ठभूमिबाट आएको एक राजनीतिकर्मी हुँ । हाम्रो पार्टीमा विविध पृष्ठभूमि र क्षमता राख्नेहरुको केन्द्रिकरण भएको छ । विविध पृष्ठभूमि र प्रतिभाहरुको केन्द्रिकरण आफैंमा ठूलो पूँजी हो, गौरव गर्न लायक विषय पनि हो । फेरि यो आफैंमा समस्या पनि हो । हामीले त विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरुलाई एउटा भाँडोमा राखेर आवश्यक तापक्रम दिएर पगालेर अर्को पदार्थ बनाउन खोजेका थियौं । त्यो जिम्मा पाएको व्यक्ति देवेन्द्र पौडेल स्वयं हुनुहुन्थ्यो । उहाँले संगठनका देखिएका यस्ता समस्याको समाधान आफैंले किन खोज्नु भएन ? पौडेलजीले अरुलाई एउटा औंला ठड्याइरहँदा बाँकी औंला उहाँतर्फ नै सोझिएको छ भन्ने बुझ्नु पर्दैन ?
फरक पृष्ठभूमिका साथीहरुको केन्द्रिकरण हाम्रो पार्टीमा भएकाले मनमुटाव थियो । विशेष गरेर माओवादी पृष्ठभूमि भएकाले अरुलाई हामीले लडेर परिवर्तन ल्याएको, तिमीहरु फल खान आएका हौं भन्ने जस्तो गरी सोच्ने, माओवादी पृष्ठ भूमिबाहेककाले माओवादी आन्दोलनलाई अलि बढी नै नकारात्मक भएर सोच्ने समस्या थियो । यसलाई न्यूनीकरण गरेर समाधान गर्नेतिर हाम्रो ध्यान हुनुपथ्र्यो । जिम्मा पाएको व्यक्तिले नै यस्तो भन्दै हिँड्नु शोभनीय कुरा होइन । पग्लने क्रम जारी नै रहेकाले अहिले नै यसो भनिहाल्नु गलत हो । पग्लने प्रक्रियाबाट जसरी अलग्गिनु भएको छ, उहाँहरु अन्य साथीहरुबाट अनावश्यक ढंगले आतंकित हुनु भयो भन्ने मलाई लागेको छ ।
देवेन्द्र पौडेलले बाबुराम भट्टराई नेतृत् वगर्न असफल भए, नयाँ शक्ति बनाउने ल्याकत उहाँसँग छैन भन्ने आरोप लगाएका छन्, यति कमजोर नेतृत्वबाट नयाँ शक्ति बन्ला ?
चित्त नबुझेपछि, हिँडिरहेको बाटो त्यागेर अन्यत्र लम्किएपछि इमान्दारहरुले सत्य बोल्छन् । तर, बेइमानहरुले बांगो, छलछाम र कपटपूर्ण कुरा गर्छन् । अब उहाँहरुले सीधा भन्न किन नसकेको हो ? मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ । वामलोकतान्त्रिक समून्नत समाज हामीलाई मन परेन भनेर उहाँहरु किन भन्न सक्नु हुन्न ? चुनावी परिणामले यो पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं भन्ने सत्य ओकल्न देवेन्द्रजीहरुलाई केले दिएको छैन मैले बुझ्न सकेको छैन । ८–१० वर्ष पर्खन नसक्ने अधैर्यता जुन उहाँहरुमा देखिएको छ, त्यसलाई लुकाएर गरिएका यस्ता तर्कहरुको कुनै तुक छैन ।
अर्को कुरा बाबुराम भट्टराईले चाहेर पार्टी बन्ने हो र ? या अन्य रामबहादुर श्यामबहादुर आउँदैमा पार्टी बन्ने हो र ? होइन । समाजको माग र ऐतिहासिक आवश्यकतालाई वोध गरेर पार्टी निर्माण गर्ने हो । समाजको आवश्यकतालाई वोध गरेर निर्माण गरिएको पार्टी छ भने त्यो कालान्तरमा स्थापित हुन्छ । नत्र भने पार्टी बन्दैन । अहिले हामी संवृद्धिको एजेन्डा बोकेर हिँडेका छौं, यो संवृद्धिको एजेन्डा हो कि होइन ? यदि हो भने पुराना पार्टीबाट यो आवश्यकता पूरा हुने सम्भावना म त देख्दै देख्दिनँ । साथीहरु जसरी अविचलित ढंगले लाग्नु पथ्र्यो, त्यसो नगरेर विचलित हुनु भयो । यसमा मलाई दुःख लागेको छ । कम्युनिष्टहरुको पुरातन षड्यन्त्रात्मक कार्यशैली हामीले विगतमा भोग्दै आएको थियौं, त्यसैको पुनरावृत्ति देवेन्द्रजीलगायत साथीहरुले गर्नु भएको छ । यसले मलाई खिन्न बनाएको छ ।
पार्टी निकै कठिन मोडमा पुगेको छ । अब नयाँ शक्ति पार्टी विघटन हुन्छ की पुर्नगठन हुन्छ ?
पहिलो कुरा अब वैचारिक, राजनीतिक स्पष्टता गर्दै हामी अब अगाडि बढ्छौं । महाधिवेशनसम्म पुग्दा हामी वैचारिक राजनीतिक स्पष्टता गर्नेछौं । विचारको आधारमा संगठन निर्माण गर्छौं ।
संगठन चलायमान गर्न नेतृत्वको टिम चाहिन्छ । त्यो अब निर्माण गर्छौं । यी तीन कुरा भइसकेपछि जनताको बीचमा कार्यक्रमहरु बनाएर सशक्त ढंगले अगाडि जान्छौं ।
प्रचण्डले पटक–पटक जनयुद्धकालीन शक्तिहरुलाई घर फर्कन भनिरहनु भएको छ । अब पुरानै घर फर्किए भएन र ?
हामीले त पहिले पनि भनिसकेका हौं – माओवादी केन्द्र रातो स्टिकर टाँसेको असुरक्षित घर हो । त्यो घरमा सामान्य ढंगले टालटुल गरेर बस्न लायक हुँदैन भनेर विगतमा अलग्गिएका हौं । त्यसकारण रातो स्टिकर टाँसिएको घरमा फर्किएर ज्यान जोखिममा हाल्नेवाला छैनौं । बरु अहिले दुःखै भए पनि प्लाष्टिकको यही घरमा दुःखजिलो गरेर बस्छौं । त्यसपछाडि हामी भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँछौं । रातो स्टिकर टाँसेको घरमा जोखिम मोलेर फर्कंदैनौं, यसमा सबै स्पष्ट भए हुन्छ ।
साझा विवेकशील पार्टीले पनि तपाईंहरुले जस्तै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको कुरा गरिरहनु भएको छ । त्यसो हो भने त उतै मिले भयो नि ?
तत्काललाई यो सम्भावना मैले देखिरहेको छैन । साझा विवेकशील पार्टीको बारेमा मलाई धेरै टिप्पणी गर्नु त छैन । तर हामीले संवृद्धि ल्याउने हो भने नयाँ शक्तिले अघि सारेको ५ स अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । उहाँहरुले ‘५ स’ मध्ये एउटा ‘स’ समाउनु भएको छ । सुशासन र सदाचारले मात्रै नेपालमा संवृद्धि नआउने भएकाले नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरुसँग अघि बढ्न सक्ने अवस्था तत्काललाई छैन । अहिलेलाई म उहाँहरुबारे यति मात्रै टिप्पणी गर्न चाहन्छु ।
नयाँ शक्तिमा चलेको पछिल्लो हावा–हुन्डरिले कार्यकर्ता शुभेच्छुक निराश र हतोत्साहित छन् उनीहरुलाई कसरी रोक्नसक्नुहुन्छ ?
एउटा जीवन्त पार्टीमा आउने जाने क्रम चलिरहन्छ । त्यही प्रक्रियाअनुसार केही साथीहरुले पार्टी बदलेका छन् । यसबाट कत्ति पनि विचलित नहुन नयाँ शक्तिका शुभचिन्तकहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । एकै वर्षको अवधिमा कुनै राजनीतिक दल बन्छ बन्दैन भनेर मापन गर्न नमिल्ने भएकाले ५ वर्ष लगनशील भएर बनाउन लाग्छौं । त्यसपछि बनेन भनेर सोच्छौं । तर, अहिले नै निराश हुने अवस्था छैन, अविचलित भएर अघि बढ्नुस् भन्न चाहन्छु ।